Iphone | Mey 2022
karatra sim natsofoka fa tsy misy serivisy
afaka miasa an-trano google amin'ny iphone
iphone accessory mety tsy tohanana
tsipika amin'ny fanamboarana efijery iphone
Tsy hifandray amin'ny Internet ny iPhone-ko! Ity ny The Real Fix.
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny antony tsy hifandraisana amin'ny Internet ny iPhone ary hampiseho aminao ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny alàlan'ny torolàlana momba ny famahana olana.
Tsy mandeha ny mpandahateny iPhone? Ity ny The Real Fix!
Ny teknolojia Apple taloha dia manazava ny antony tsy mandeha ny mpandahateny iPhone anao, ny fomba fanamboarana mpandahateny iPhone izay tsy mandeha ary inona no mahatonga ny olana.
Tsy hanafatra backup an'ny iCloud ny iPhone-ko! Ity ny The Real Fix.
Ny manam-pahaizana momba ny iPhone dia mampiseho aminao izay tokony hatao rehefa tsy miaro ny iCloud ny iPhone sy ny fomba fanamboarana ireo backup iCloud mba hahafahanao mitahiry ny angon-drakitrao.
Tapaka ny efijery iPhone 6-ko! Ity ny zavatra tokony hatao.
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava izay tokony hatao rehefa rava ny efijery iPhone 6 anao ary manoro ny safidy fanamboarana sasany hahafahanao manamboatra azy io haingana araka izay tratra.
“Tsy afaka mifandray amin'ny App Store” ny iPhone-ko! Ity ny The Real Fix.
Raha mahita ny efijery tsy misy dikany na 'mampiditra' ao amin'ny App Store ianao dia vintana ianao. Hitety anao amin'ny zavatra ataoko aho raha tsy hovesatra amin'ny iPhone ny App Store.
Ahoana no fomba hanehoako ny isan-jaton'ny batterie amin'ny iPhone X, XS, XS Max, ary XR? The Fix!
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny fomba fampisehoana ny isan-jaton'ny bateria amin'ny iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, ary iPhone XR amin'ny dingana iray tsotra!
Tsy mandeha ny Microphone iPhone-ko! Ity ny The Fix.
Ny manam-pahaizana momba ny iPhone dia mampiseho aminao ny zavatra tokony hatao rehefa tsy mandeha ny mikroponao iPhone anao sy ny fomba fanamboarana ireo olana mety hitranga amin'ny rindrambaiko sy ny fitaovana.
Tsy milalao Voicemail ny iPhone-ko! Ity ny The Real Fix ho an'ny Verizon, AT&T, & T-Mobile.
Ny manam-pahaizana Apple dia mampiasa torolàlana iray isaky ny dingana hanoroana anao izay tokony hatao rehefa tsy milalao voicemail ny iPhone mba hahafahanao manamboatra tsara ny olana.
iPhone Stuck manamarina fanavaozana? Ity ny The Real Fix!
Manazava ny manampahaizana Apple iray ny antony mahatonga ny iPhone-nao mikatona amin'ny 'Verifying Update ...' rehefa avy nanandrana nisintona sy nametraka ny kinova farany an'ny iOS ianao!
Fa maninona no mihena ny iPhone-ko? Ity ny Marina!
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny antony mahatonga ny iPhone tsy hihena ary mampiseho aminao ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny alàlan'ny torolàlana tsikelikely.
“Tsy afaka manamarina ny mombamomba ny mpizara” ny iPhone-ko! Ity ny The Real Fix.
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny antony 'tsy ahafahan'ny iPhone' manamarina ny mombamomba ny mpizara 'ary mampiseho ny fomba fanamboarana an'ity olana ity ho tsara amin'ny fampiasana torolàlana iray isaky ny dingana.
Fa maninona no mavo ny bateriko iPhone? Ity ny The Fix.
Ny teknolojia Apple taloha dia manazava ny antony mavo ny batterie iPhone anao, ny fomba famadihana azy io ho ara-dalàna, ary ny antony nahatonga azy io ho mavo tamin'ny voalohany.
Mamiratra ny efijery iPhone-ko. Ity ny The Fix!
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny antony mahatonga ny efijery iPhone hikorontana ary hampiasa torolàlana momba ny famahana olana isan-dingana mba hampisehoana aminao ny fomba fanamboarana azy tsara!
iCloud Storage Full? Aza mandoa vola amin'ny iCloud backup intsony.
Teknolojia Apple taloha no manazava ny fomba famerenana ny iPhone amin'ny iCloud nefa tsy mandoa vola amin'ny iCloud Storage fanampiny, ary ny fomba tsy ho lany fitehirizana intsony.
FaceTime Tsy Miasa Amin'ny iPhone? Ity ny antony & The Fix!
Nanazava ny manam-pahaizana Apple fa maninona ny FaceTime no tsy miasa amin'ny iPhone, iPad, iPod, na Mac, ary ny fomba hamaritana sy hamahana ilay olana ho tsara.
Tsy hanavao ny iPhone-ko! Ity ny The Real Fix.
Ny manam-pahaizana momba ny iPhone dia mampiseho aminao izay tokony hatao rehefa tsy hanavao ny endriny vaovao amin'ny iOS ny iPhone misy ny fanamboarana toa ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fanavaozana ao amin'ny iTunes.
Tsy hiampanga ny iPhone-ko, fa milaza kosa izany fa mamaly! Ity ny The Fix.
Ny manam-pahaizana Apple dia mampiasa tsikelikely mba hanazavana ny zavatra tokony hatao rehefa tsy handoa vola ny iPhone na dia milaza aza fa mandoa izany.
Tsy mandeha ny fanairana iPhone? Ity ny antony & The Fix!
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava izay tokony hatao raha tsy mandeha ny fanairana iPhone anao ary asehony anao ny fomba fananganana ilay endri-pihetsiketsika fanairana!
Tsy hitan'ny iPhone ny fitbit-ko. Ity ny The Real Fix!
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny antony tsy ahitan'ny iPhone ny Fitbit anao ary asehony anao ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny alàlan'ny torolàlana tsikelikely.
iPhone Cellular Data Tsy mandeha? Ity ny The Real Fix!
Ny manam-pahaizana Apple dia mampiasa torolàlana famahana olana isaky ny dingana hanehoana ny fomba fanamboarana ny olana rehefa tsy mandeha ny Data finday iPhone!